Imizekelo evamile yeeteksi ezingenakubalwa
Hayizo zonke iisethi ezingapheliyo ezifanayo. Enye indlela yokwahlula phakathi kwezi setethi ngowokubuza ukuba isetyenzisi sinokungapheli okanye cha. Ngale ndlela, sitsho ukuba iisethi ezingapheliyo zibalwa okanye zingenakubalwa. Siza kuqwalasela imizekelo emininzi yeeseti ezingapheli kwaye sinqume ukuba zeziphi ezingabonakaliyo.
Siqala ngokulawula imizekelo emininzi yeeseti ezingapheliyo. Iinqununu ezininzi ezingapheliyo esiza kuzicingela ngokukhawuleza zifumaneka zingenakubalwa.
Oku kuthetha ukuba banokufakwa kwidilesi enye kunye neenombolo zemvelo.
Inombolo yemvelo, iinombolo, kunye nenani elingqiqweni liphela ngokungenakunzima. Nayiphi na inyunyano okanye intambo yeetekethi ezingapheliyo nazo zibala. Umkhiqizo weCartesian naliphi na inani leetekethi ezibalaseleyo libala. Naluphina i-subset ye-set set count is also countable.
Indlela eqhelekileyo yokuba iisethi ezingenakubalwa ziqaliswa ekuqwalaseleni ithuba (0, 1) leenombolo zangempela . Kule nyaniso, kunye nomsebenzi omnye komnye f ( x ) = bx + a . kulungelelaniso oluchanekileyo ukubonisa ukuba nayiphi na ikhefu ( a , b ) yamanani ngokwenene ayinakubalwa.
Isethi yonke yamanani ngokwenene ayinakubalwa. Enye indlela yokubonisa oku kukusebenzisa umsebenzi omnye komnye omnye ( f ) x ( x ) = tan x . Idibansi yalo msebenzi yithuba (-π / 2, π / 2), isethi esingenakubalwa, kwaye uluhlu lubekwe isethi yazo zonke iinombolo zangempela.
Ezinye izitishi ezingenakubalwa
Imisebenzi ye-basicory theory ingasetyenziselwa ukuvelisa imizekelo emininzi yeesethi ezingapheliyo:
Ukuba i- subset ye- B ne- A ayinakubalwa, ngoko kunjalo B. Oku kunikeza ubungqina obuchanekileyo bokuthi yonke isethi yamanani ngokwenene ayinakubalwa.
Ukuba i- A ayinakulinganiswa kwaye iB isiphi na isethi, imanyano A U B ayinakubalwa.
Ukuba i- A ayinakulinganiswa kwaye B nayiphi na isethi, umkhiqizo weCartesian A x B ayinakubalwa.
Ukuba i- A ayinasiphelo (mhlawumbi ingahlawulwanga) ke isetyenzisi se- A asinakubalwa.
Eminye imizekelo emibini, ehambelana nomnye imangalisa. Ayikho yonke i-subset yamanani okwenene ayinakunaniseki (ngokuqinisekileyo, amanani anengqiqo enza i-subset ebonakalayo yezinto ezibonakalayo ezizinzileyo). Ezinye iissetyenzisi ezingenakubalwa.
Enye yezi ngqamaniso ezingapheliyo zibandakanya iindidi ezithile zokudlulela kwexesha elide. Ukuba sikhetha amanani amabini kwaye senza zonke ukwandiswa kwexesha lokugqibela kunye namadidi amabini kuphela, ke isethi esingapheliyo ayinakubalwa.
Esinye isethi sinzima kakhulu ukwakha kwaye asinakubalwa. Qala ngexesha elivaliweyo [0,1]. Susa isahlulo sesithathu sale setethi, okubangele [0, 1/3] U [2/3, 1]. Ngoku ukhiphe isahlulo sesithathu ngasinye sesahlulo esiseleyo. Ngoko (1/9, 2/9) kunye (7/9, 8/9) isuswe. Siqhubeka ngale ndlela. Isethi yamaphuzu asala emva kokuba zonke ezi zikhethiweyo zisuswe akusikho ithuba, nangona kunjalo, alinakulinganiswa. Olu sethi lubizwa ngokuba yiCantor.
Kukho izixhobo ezininzi ezingenakubalwa, kodwa imimiselo engentla ingenye yeesethi eziqhelekileyo ezidibeneyo.
Yintoni eyenziwa yi-Unitarian Universists?
Kwavela Ngaphantsi! - I-20 yezona ziLwandle eziPhambili zeHleight Horror
Umdlalo wePatile yeBhola eZiTandathu: Uzonwaba kwaye ucelomngeni
Isikhokelo seNyathelo-ngeNyathelo-nyiweyo ekutshintsheni iMoto yakho yeMoto yePuel Fuel
Yayiyiphi Impembelelo Eyona Mkhulu Kulo Mlando?